Qalabka Anime Cosplay ee ugu Fiican ee 2021 - Muuqaalka Cradle
Leave a Comment Qalabka ugu Fiican ee Anime Cosplay ee 2021
Dhamaanteen waan jecel nahay Naadi, iyo cosplaying Naadi waa hal dariiqo oo aad ugu dhowaan karto Naadi aad jacayl. Haddaba, maxay yihiin kuwa ugu fiican Naadi qalabyada? Iyo halkee laga yaabaa iyo waa in aad iibso iyaga? Hagaag maqaalkan waxaan ku dhex mari doonaa 10ka Anime ee ugu sarreeya accessories si ay u iibsadaan iyo halka ay u iibsadaan iyaga. Waxaan bixin doonaa dib u eegis gaaban waxaanan sidoo kale bixin doonaa xiriirinta dhammaan walxaha la muujiyay. Alaabooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa la waayay ama laga yaabaa ka mid ah stock marka fadlan la soco.
10. Weerarkii silsiladaha furaha ee Titan
iibso AOT Key Silsilado halkan
Kuwani Silsiladaha Furaha ee AOT waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ku bilowdo AOT Anime Collection iyo silsiladahan muhiimka ah ee quruxda yar waxay ka kooban yihiin jilayaal badan oo kala duwan Weerarkii Titan Anime Series oo kuwan si fudud ayaa loogu xidhi karaa silsiladdaada wakhti yar gudaheed. Waxaa keenay 100 macaamiisha faraxsan ee goobtan waxaad dareemi doontaa badbaado iyo ilaalin. All alaabta la socota maraakiibta free ilaa 185 wadan iyo sidoo kale a 60 maalin lacag damaanad dib. Silsiladan Furaha ah ayaa hubaal ah inay ku jiraan liiskan wanaagsan taasina waa sababta ay ugu jiraan liiskan Anime Cosplay Accessories.
Halkan ka iibso Cagaha Anime
Imaanshaha lambarka 9 ee liiskayaga Anime Cosplay Accessories, kuwanu waxa laga yaabaa inay ku dhufteen ama seegaan qaar ka mid ah dukaamaystayaashii goobtan, naqshadda dhejisyadani way ka duwan yihiin inta badan istiikarooyinka aad ka heli karto boggan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad taageere u tahay Gabdhaha anime, ka sii muhiimsan cagahooda markaa dhejisyadani waa adiga kaliya. Waxaa lagu heli karaa xirmooyin 10, 20 iyo 50 waxaana laga heli karaa meel aad u badan hooseeyo kharashka Dhammaan stickers-ku kuma soo noqnoqdaan si aadan u helin isla stickers in ka badan hal mar baakidh kasta. Laga sameeyay sare PVC tayo leh stickers sidoo kale waa kuwa aan biyaha lahayn si aad kuwan ugu dhejiso ku dhawaad wax kasta oo dusha sare!
Halkan ka iibso silsiladda shaqada ee Naruto Cloud
Haddii aad tahay taageere aad u adag Naruto markaas waxaad jeclaan doontaa kuwan cajiibka ah Katiinadaha Naruto kaas oo aad ka iibsan karto crdleviewstore.com qiimo aad u jaban. Waxaa laga sameeyay Zinc Alloy kuwan murriyado kaalay sidii a Silsiladda Furaha ah kaas oo aad si fudud ugu xidhi karto furayaashaada wakhti yar, ama Katiinad Casri ah oo aad ku xidhan karto dhar kasta oo qaabaysan. Shaygani waa mid ay qasab tahay in la iibsado waana sababta ay ugu jirto agabkayaga ugu Wanaagsan ee Anime Cosplay si aad u iibsato 2021. Dhib ma leh dookhaga silsiladahan ayaa si sax ah kuugu haboonaan doona.
Horudhac tab cusub
7. Dhagaha Bisadaha Cosplay
Halkan ka iibso Cosplay bisadaha dhegaha
Marka la joogo lambarka 7 ee Agabka Anime Cosplay ee ugu Fiican waxaan ku haynaa Dhegaha Bisadda Anime Cosplay. Ilaa hadda waa mid ka mid ah alaabta ugu guulaha badan uguna caansan boggan waana ay fududahay in la arko sababta. Kuwaas Dhagaha Bisadaha Cosplay waa kuwo aad u qurux badan oo naqshadeeda fudud ayaa ka dhigaysa a cajiib ah oo qurux badan Gift Anime qof kasta. Tani waxay u samayn kartaa hadiyad fiican qofka raba inuu ciyaaro jilaa ay jileyso bisad ka socota anime kala duwan. Sida aan ku sheegnay in ka badan 600 Dalabka alaabtan waxaan si hubaal ah u odhan karnaa in shaygani adiga uun yahay! Hadda oo leh a 60 maalin lacag damaanad dib iyo dhoofin bilaash ah.
6. Ciyaartoyda Ledhka Taleefanka ee Jujutsu Kaisen
Halkan ka soo iibso Tusyada Ledhka Taleefanka ee Jujutsu Kaisen
Ku dallacaadda taleefankaaga waa hawl maalmeed aan dhammaanteen dhammaystirno. Markaa miyaanay wacnayn inaad adigu leedahay Sawirka anime kee ku dheggan hogaanka inta uu dallacanayo? Waa hagaag kuwan Jujutsu kaisen Qalabka Ledhka Taleefanka ah ee aad awooddo, iyo qaab ahaan. U muuji taageeradaada Naadi kuwaas oo cajiib ah Jujutsu kaisen Hogaamiyaasha Taleefanka. Lagu heli karo jilayaal badan oo kala duwan oo laga dooran karo qalabkan anime ee cajiibka ah ayaa wax weyn ku kordhin kara adiga Jujutsu kaisen Ururinta Anime. Kuwani waa shay yar oo aad u fiican qof kasta waana sababta ay u sameeyaan hadiyad weyn iyo sababta ay ugu jiraan liiskan Top Anime Cosplay Accessories.
5. Silsiladda Furaha ee Gacan-ku-dhiiglaha Jinni
Ka iibso Silsilada Furaha ee Demon Slayer
Marka la joogo lambarka 5 ee liiska Anime Cosplay Accessories liiska waxa aanu ku haynaa shayyo Anime ah Dembi disho Kaas oo noqday mid aad loo xiiseeyo hadda, gaar ahaan marka la soo saaro Filimkooda. Haddaba maxaa ka jira kuwaas Sifooyinka Muhiimka ah iyo sababta ay qasab ugu tahay inay ka iibsadaan goobtan? Si fiican ayaa laga sameeyay Zinc Alloy oo leh dad badan kala duwan naqshadeeyay dhammaan kuwan tayo sare leh iyo silsilado muhiim ah oo si khibrad leh loo sameeyay Silsiladaha Furaha ee Gacan-ku-dhiiglaha Jinni waxaa laga yaabaa inay tahay waxaad u baahan tahay oo kaliya. Xargaha sidoo kale waa a horyalka casaan kaas oo si fudud qoortaada ugu dhejin doona. iibso hadda oo ku biir over over 200 macaamiisha kuwaas oo horay u iibsaday kan item.
4. Qalabka Baabuurka ee Naruto
Halkan ka iibso Qalabka Baabuurka ee Naruto
Marka la joogo lambarka 4 ee liiska Agabka Anime Cosplay ee ugu Wanaagsan waxaan ku haynaa kan Qalabka Baabuurka ee Naruto, taas oo ah mid aad u fudud welina jecel taageere ka mid ah iibsadayaashayada halkan at crdleviewstore.com So sababta? Hagaag shaygan waa la awoodi karo iyo miisaan yar, waxaad si fudud ugu dhejin kartaa baabuurkeena adiga oo ku dhejinaya muraayadda gaariga. Dhaqdhaqaaqa baabuurka ayaa sameyn doona siyaada dib iyo afraad u lul marka aad raacdo safarkaaga. Hadda oo leh a 60 maalin lacag damaanad dib iyo maraakiibta free.
3. Silsilad-furaha Seef-Dugista Jinni
Iibso silsiladaha furaha seefta dilaaga jinniga
Waan ogahay waxaad ku fekereyso, mid kale Dembi disho alaabta? Hagaag, waxaan haysanaa sabab wanaagsan oo aan u soo bandhigno kuwan Demon Slayer ee cajiibka ah Sifooyinka Muhiimka ah adiga. Ma aha oo kaliya silsiladaha muhiimka ah kuwan ayaa ka kooban dhammaan Gaajo ka Dembi disho ganacsi. Silsiladahan Furaha ah waxay u samayn karaan hadiyad weyn qof kasta waana ay fududahay in la arko sababta. Waxaan aragnaa dukaamo kale oo badan oo isku dayaya inay kuwan ku iibiyaan qiimayaal waalan sida $20 hal silsilad oo muhiim ah. $20 hal Silsilad Fure ah, dhab ma tahay? Ma aha dukaankan. Waxaan bixinaa ah la awoodi karo qiimaha iyo dhoofinta bilaashka ah. Tani waa shay yar oo madadaalo leh haddii taageeraha weyn ee Anime-ka, oo doqonnimadu ay tahay inay bixiso wax ka badan $10 kuwan runtii, taasi waa sababta ay ugu jiraan liiskan Agabka Anime Cosplay ee ugu Fiican ee 2021.
2. Istiikarrada Hentai Waifu
Iibso istiikaradaada Hentai Waifu hadda
Oo hadda soo gal hadda haddii aad a Hentai taageere markaa waad jeclaan doontaa kuwan Hentai dhejisyo ay ku jiraan qaar badan oo ka mid ah waifooyinka aad ugu jeceshahay muuqaallo badan oo Hentai oo uumi leh. Kuwani waa qaar ka mid ah Waifus-ka ugu kulul Hentai Taariikhda, oo leh cabbirro 3 baakidh ah (10, 50 iyo 100) waxaanu dammaanad qaadaynaa inaad ku qanacdo alaabtan. Waxay sameeyaan qalab cosplay weyn. Dhammaan xirmooyinka dhejiska ah maaha kuwo soo noqnoqda markaa ma heli doontid warqad isku dhejis ah in ka badan hal mar xirmo kasta! Qiimaha jabinta rikoorka waxaad ku soo qaadan kartaa 100 stickers kaliya $7.00 - taasi waa 100 dhejis oo kala duwan oo aad jeceshahay Hentai Waifus lagugu keenay albaabkaaga oo wata maraakiib bilaash ah iyo a 60 maalmood lacagta bak damaanad haddii aadan ku faraxsanayn!
1. Sanduuqa Hadiyada Deluxe Demon Slayer
Soo iibso Deluxe Demon Slayer
Wow, magacaas oo kale leh la yaab maaha in shaygani yahay kan ugu sarreeya liiskan. Haa waad maqashay, kan Gift Box oo leh Anime-ka Dembi disho waxa ku jira waxyaabo cajiib ah oo ka dhigaya hadiyadda ugu fiican ee taageerayaasha Anime-kan caanka ah. Gudaha Gift Box waxaa jira shay kala duwan oo qiimo sare leh. Sida: Katiinado bir ah oo tayo sare leh iyo qalabyada silsiladaha muhiimka ah, qurxinta dhamaantood ka Dembi disho ganacsi. Sababtan awgeed waxay sameeyaan qalabyada Cosplay weyn. Waxaad sidoo kale heli doontaa Mini Dembi disho Seefadaha la soo ururin karo iyo madax tusmada yaryar iyo kuwa la ururin karo ee ka Naadi. Waxaa jira 4 sanduuq oo kala duwan oo laga dooran karo dhammaantood oo leh xulasho u gaar ah oo alaab la ururin karo. Haddaba maxaad sugaysaa? iibso kaaga hadda crdleviewstore.com
Ma xiisaynaysaa blogging?
Waxaad wax ka qori kartaa Anime-yada aad jeceshahay oo waxaad kula wadaagi kartaa fikradahaaga iyo fikradahaaga dhowr dhagsi oo keliya! Waxaad wax ka qori kartaa Anime ama wax kasta oo aad rabto. Oo waxaa jirta hab aad ku kasban karto! Haa waa sax, waxaad lacag ku kasban kartaa WordPress. In ka badan 30% intarneetka ay ku shaqayso iyadoo la isticmaalayo WordPress waxaana jirta sabab u ah. WordPress waa adeeg aad u faa'iido badan oo si sahlan loo isticmaali karo oo aad isticmaali karto si aad u abuurto blogs iyo dabcan degelkaaga si fudud oo degdeg ah! Runtii maqaalkan iyo boggan waxaa lagu abuuray WordPress.
Isku qor koontadaada WordPress maanta oo hel $25 dhibcaha WordPress ee akoonkaaga!
Boostada waxaa u heellan jilaha Kiyotaka Ayanokōji oo ka soo muuqda Fasalka Elite. Wax badan oo ka kooban jilaagan ayaa iman doona dhawaan.
Habka Husband-ka Guriga waa Slice Of Life Anime oo asal ahaan soo baxday Abriil 8, 2021. Waa laqabsiga Manga ee isku magaca ah, kaas oo aad loo jecel yahay, sida Anime-ka. Waxay daba socotaa nin lagu magacaabo Tatsu, kaasoo, ka dib nolol dheer oo dambi ah uu go'aansaday inuu u yeedho [...]
Weligay ma maqal wax la mid ah. Kuwani waa waxa aad dhihi karto ka dib markaad maqasho Weerarkii Titan Season 3 oo dhammaanaya. Waxa ay ahayd wax la yaab leh, dabcan, waa furitaankii ugu fiicnaa ee aan ilaa hadda arkay marka la barbar dhigo kuwa kale oo dhan. Dulmar - Weerarkii Titan ee soo afjaraya Hoos waxaa ah furitaanka oo aad daawan karto […]
Kaguya Sama waa Anime Romance la jecel yahay oo asal ahaan soo baxay 2019. Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonaa wax walba oo ku lug leh Kaguya Sama Season 3. Kaguya Sama waxay haysataa sheeko xiiso badan oo lagu bilaabayo laakiin xilli ciyaareedkii labaad ayaa bilaabay inuu sii socdo iyo tan Saamaynta marka la eego sida sheekada ugu weyn iyo kuwa kala duwan […]
Qof degan Zhenjiang, Gobolka Jiangsu ayaa loo diray isbitaalka Abriil 28-keedii ka dibna waxaa laga helay H10N3 Maajo 28-keedii. Xogtan waxaa bixiyay komishanka caafimaadka Si kastaba ha ahaatee, guddiga ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo sida ninkaasi uu ku dhacay. Xaaladiisa ayaa hadda degan, waxaana uu durba ku guda jiraa […]
Hajimete no Gal waa Anime nooca Echhi aad loo jecel yahay. Waxay caan noqotay markii dib loo sii daayay 2017. Anime-ka ayaa si aad ah loo soo dhaweeyay wuxuuna ahaa taageere ay jecel yihiin dad badan. Maqaalkan, waxaan ku sharxi doonaa sababta Xaajimete no Gal Season 2 ay u badan tahay, iyo waqtiga ay dhici doonto […]
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa wax kasta oo aad rabto inaad ka ogaato Junichi Hashiba, jilaagii ugu weynaa ee Hajimete no Gal. Waxa aynu qoraalkan ku dul qaadan doonaa muuqaalkiisa, dabeecadiisa, taariikhdiisa iyo qaar kale oo badan.
Gelitaan Hore Instagram Star Jeon yebin [전 예빈] Taageerayaasha Stuns ee New Bikini Instagram Post
Gelitaanka Xiga Ha Ila Ciyaarayn Miss Nagatoro - Xilliga 2aad Taariikhda Horyaalka Premier League + Guudmarka & Fikradaha